အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံ သိုလှောင်နိုင်မှု ပမာဏကန့်သတ်ခြင်း | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံ သိုလှောင်နိုင်မှု ပမာဏကန့်သတ်ခြင်း » အထွေထွေ
Thu, 10/14/2021 - 11:14 -- journal_editor
ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့်စားသုံးဆီများအပေါ် ကောက်ခံလျက်ရှိသောအခွန်နှုန်းထားများအား လျော့ချခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါလုပ်ငန်းရှင်များ လက်ဝယ်၌ စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံများ သိုလှောင်ထားရှိနိုင်ခွင့်ကို အိန္ဒိယအစိုးရကကန့်သတ်လိုက်ပါသည်။
အိန္ဒိယစားသုံးသူရေးရာ၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ၈-၁၀-၂၀၂၁ နေ့၌ အမိန့်အမှတ် S.O. 4146(E) ကို ထုတ်ပြန်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ လက်ဝယ်၌ စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံများ သိုလှောင်ထားရှိခွင့်ကို အမိန့်ထုတ်ပြန်ချိန်မှစတင်၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကန့်သတ်မှုပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ကုန်စည်လက်ကျန်နှင့်စားသုံးမှု အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ သိုလှောင်ထားရှိနိုင်မည့်ပမာဏကို သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရအစိုးရအဖွဲ့များက သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အကယ်၍ ၎င်းတို့လက်ဝယ်တွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်ထက် ကုန်စည်များပိုမိုလျက်ရှိလျှင် စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးမှုရေးရာဦးစီးဌာန၏ ကုန်စည်အချက်အလက်အင်တာနက်စင်္ကြန်၌ ထုတ်ဖော်ကြေညာရမည်ဖြစ်ပြီး ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သတ်မှတ်ပမာဏသို့ လျော့ချသိုလှောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် မှတ်ပုံတငလက်မှတ်ရယူလျက် စားသုံးဆီတင်ပို့လျက်ရှိသော ဆီကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်သူ၊ ပြန်လည်သန့်စင်သူ၊ လက်လီလက်ကားဖြန့်ဖြူးသူများသည် ပြည်ပတင်ပို့ရန်အတွက် စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံများအား လက်ဝယ်ထားရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြသနိုင်ပါက ဤကန့်သတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်သူ၊ ပြန်လည်သန့်စင်သူ၊ လက်လီလက်ကား ဖြန့်ချီသူများသည်လည်း ၎င်း၏လက်ဝယ်ရှိ စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ပါက အလားတူကင်းလွတ်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြည်တွင်းစားသုံးဆီလိုအပ်ချက်၏ ၆၀% ခန့်အား ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် နှစ်စဉ်ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းနေရသည်။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အခြေအနေနှင့် ပြည်တွင်းသွင်းအားစုအပိုင်း၌ ကျပ်တည်းမှုအရ ပြည်တွင်း၌ စားသုံးဆီဈေးနှုန်းများသည် လွန်ခဲ့သည့် ၁ နှစ်တာအတွင်း မြင့်တက်လာခဲ့ရာ အိန္ဒိယစားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ရှိ ပဲပုတ်ဆီလက်လီဈေးနှုန်းမှာ ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၅၄.၉၅ ရူပီးနှုန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ၄၆.၁၅% ပိုမိုလာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထို့အတူ ၁ နှစ် တာကာလအတွင်း ဆီ ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် မုံညင်းဆီနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတို့သည် ၄၃% ခန့်၊ နေကြာဆီသည် ၃၈.၄၈% ခန့်နှင့် စားအုန်းဆီသည် ၃၈% ခန့် ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းများ အသီးသီး ပိုမို မြင့်တက်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ၁၀-၁၀-၂၀၂၁ နေ့၌ သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် အစိုးရသည်ပြည်တွင်း၌ စားသုံးဆီကဲ့သို့သော အရေးကြီးကုန်စည်များ၏ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးအတွက် သွင်းကုန်အပေါ် ကောက်ခံသည့်အခွန်စနစ်၏ ထိရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ထားရှိသည့် ကုန်စည်ပမာဏကို ကုန်စည်အချက်အလက်စင်္ကြန်သို့ ထုတ်ဖော်တင်ပြစေခြင်း စသည်ဖြင့် ဘက်စုံကြပ်မတ်သည့် မဟာဗျူဟာကိုချမှတ် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ NCDEX အိတ်ချိန်းဈေးကွက်၌ မုံညင်းဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံများအား အနာဂတ်ကာလအတွက် ကြိုတင်ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ၈-၁၀-၂၀၂၁ နေ့မှစတင်၍ ဆိုင်းငံ့စေပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဤသို့ ဆောင်ရွက်ချက်များက စားသုံးဆီဈေးနှုန်းများ တည်ငြိမ်လျက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ စားသုံးသူပြည်သူများအတွက် သက်သာချောင်ချိမှုရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအစိုးရအဖွဲ့များအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးမှုရေးရာဦးစီးဌာန၏ ကုန်စည်အချက်အလက်စင်္ကြန် (https://evegoils.nic.in) သို့ လုပ်ငန်းရှင်များမှ စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံ ကုန်လက်ကျန်စာရင်းများ ပုံမှန်ဖော်ထုတ်တင်ပြစေရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဗဟိုအစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါသည်။
Source: 1. Order No. S.O. 4146(E) dated 8th October 2021 of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution of India
2. Centre imposes stock limits on edible oils to soften prices in domestic market, 10-10-2021, Economic Times